उपलब्धी सुनाउँदै बाहिरिए दाहाल - Karobar National Economic Daily
उपलब्धी सुनाउँदै बाहिरिए दाहाल
query_builderMay 25, 2017 7:54 AM supervisor_accountजगन्नाथ दुलाल visibility597
चीनसँगको सम्झौता र फास्ट ट्र्याकका विषयमा प्रश्न गलत थिएन, सोध्नेको नियत ठिक थिएन
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारका उपलब्धीहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
विपक्षीले संसद् अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । उनले आफ्नो राजीनामालाई नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको ‘नैतिकताको खडेरी’ तोड्ने दृढ संकल्प भएको बताएका छन् ।
सम्बोधनलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । राष्ट्रपतिले बुधबारै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छन् ।
नेपाली कांग्रेससँग भएको समझदारीअनुसार नै आफू अगाडि बढेको बताउँदै सत्ता छाड्नुपर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्पराबाट आफू मुक्त रहेको बताउँदै उनले भने, “अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञका रूपमा, एउटा सांसदका रूपमा र एउटा नागरिकका रूपमा मुलूक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु ।”
दाहालको राजीनामा स्वीकृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदासम्म यही सरकारले काम गर्ने उल्लेख छ । दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि नै ९ महिनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार दाहालले राजीनामा दिएका हुन् । संसद्मा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिन चाहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालले संसद् चल्न नदिएकाले सिधै आफू जनतासामु आएको उनले बताए ।
एमालेले संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थगन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले २१ बुँदे सम्बोधनमा अधिकांश समय सरकारमा आएपछि भएका उपलब्धिका बारेमा चर्चा गरे ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु, लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु, आर्थिक सूचकांकमा सुधार, भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुधार, वान बेल्ट वान रोडमा हस्ताक्षर, नेपाली सेनालाई फास्टट्र्याक बनाउन जिम्मा दिने लगायतका निर्णय मुख्य उपलब्धी भएको उनले सम्बोधनका क्रममा बताए ।
“संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि अन्यन्त तनावपूर्ण थियो । एकथरी निराशावादीले अब नेपाल राजनीतिक र संवैधानिक शून्यतामा जाने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्काथरीले राष्ट्रिय अखण्डतामै आशंका गरिरहेका थिए ।
सबै आर्थिक सूचकांकहरू निराशाजनक थिए । २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो,” आफू प्रतिकूल अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेको स्मरण गर्दै उनले दाहालले भने, “विकासका चर्का भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत पनि थिएन ।
देश यति विभाजित थियो कि निर्वाचनमा सबैको सहभागिता हुन सक्छ र अझ निर्वाचन हुन सक्छ भन्नेमै धेरैलाई अविश्वास थियो । भूकम्पपीडितहरूको बिचल्ली थियो ।
छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सहज थिएन । यसरी चौतर्फी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्याका बीच सम्मानित संसद्बाट मैले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको थिएँ ।” आफू करिब १० महिना सरकारमा रहँदा प्रतिकूल अवस्था परिस्थिति बदल्न सफल भएको दावी गरेका छन् ।
संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै अघि बढेका बताउँदै उनले सिंगो देश एकजुट भएर स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको र बाँकी ४ प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको उनले बताए । निर्वाचनले लोकतन्त्र संविधानका अक्षरहरूबाट हरेक गाउँ र नगरका वडामा पुगेको दाहालको भनाइ छ ।
“यसमा कसले जित्यो र कसले हा-यो भन्ने प्रश्न मेरा लागि सुरुदेखि नै गौण रह्यो, तात्कालिक र क्षणिक जीत–हारका स्वार्थमा अल्झेको भए निर्वाचन नै हुने थिएन,” उनले भने, “मलाई यत्ति थाहा छ, यो निर्वाचनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो ।”
गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली थप संस्थागत भएको बताउँदै उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान थप सुनिश्चित भएको जिकिर पनि गरे ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार गठन हुँदा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ओली सरकारको विदेश नीति विवेकभन्दा आवेगले निदेएशित देखिए पनि आफूले त्यसलाई सुधार गरेको बताए ।
आफ्नो सरकारले छिमेकीहरूसँग आपसी सम्बन्धलाई राजनीतिक, कुटनीतिक र जनस्तरसम्म सहज र सन्तुलित बनाएको उनको भनाइ छ । राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना होइन, आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदै गर्दा गरेका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दाहालले बुधबारको सम्बोधनमा दिएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारतर्फ लक्षित गर्दै उनको कार्यकालमा सपनाहरूको वर्षा भए पनि आर्थिक वृद्धिदर केवल ०.१ प्रतिशत रहेको र सबैजसो आर्थिक सूचकांकहरू ऋणात्मक रहेको बताए ।
तर, आफ्नो सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनावद्ध प्रयास र लोडसेडिङको अन्त्यका कारण मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक बनाउँदै राजस्व लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत बढी उठेको, ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा रहेको र १२ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि कायम गरिएको बताए ।
देशको विकास अब जनताले भाषणहरूमा होइन, तथ्यांकहरूमा र परिणामहरूमा खोज्ने पनि उनले बताए । “जब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ, एकथरी साथीहरूले संसद्मा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ‘फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? ओबीओर के हुन्छ ?
हुलाकी मार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन्,” ओलीलाई १० महिनापछि जवाफ दिँदै उनले भने, “तर, सोध्नेहरूको नियत सही थिएन । त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो, चुनौति थियो र थियो– गलत नियत । आफैंमाथि विश्वास नभएपछि मान्छेलाई अरुमाथि पनि विश्वास नहुँदो रहेछ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको राजीनामा स्विकृत भएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो पनि खुल्नेछ । राजीनामा स्विकृत भएपछि राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनको आह्वान गर्दै ७ दिनको समय दिने परम्परा छ ।
संविधानको धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यदि सो समयभित्र सहमति नजुटेमा बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संसद्मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रीत दल सरकार गठनका लागि एकठाउँमा उभिन सक्ने भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारमा जाने सम्भावना छैन ।
एमाले सरकारमा नजाने अवस्थामा सहमतिको सम्भावना अहिलेकै अवस्थामा नरहेको र बहुमतीय प्रक्रियाबाटै नयाँ सरकार गठन हुनेछ । धारा ३ को उपधारा २ मा सहमति कायम नभएमा व्यवस्थापिका संसद्को तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
राजीनामा स्विकृत भई प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य गरिरहनेछ । गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित दाहालले सरकार गठनका बेला भएको सहमतिअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजीनामा दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री राजीनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री दाहाल